Teny famporisihana: Teny manaitra 55 hanentanana sy hanomezana aingam-panahy - Quotes
Indraindray, ny hany ilaintsika dia fampaherezana kely mba hahitantsika izay tena vitantsika. Ny teny vitsivitsy voafidy tsara dia mety ho fahasamihafana eo amin'ny fampitomboana ny ezaka ataontsika sy ny famoizantsika tanteraka.
Rehefa miatrika fitsapana isika, rehefa misakana ny lalantsika ny sakana, ary rehefa tratry ny fisalasalana isika dia ao an-tsaintsika no mandresy na resy ny ady. Raha afaka mikolokolo ny finoana isika fa tsara kokoa ny manandrana ary tsy mahomby raha tsy manandrana, dia afaka manosika ny fetran'ny fitomboana isika ary mahatsapa ny tanjontsika lehibe indrindra.
Na mitady teny fampaherezana ho an'ny tenanao ianao, na ho an'ny olon-kafa amin'ny fiainanao - ny zanakao na ny namanao angamba - dia azonao antoka ny mahita ireo teny mety eto.
Ireo teny 55 mampihetsi-po avy amin'ny mpanoratra, mpitendry mozika, mpitarika lehibe ary mpandinika tsara ireo dia handrisika anao handroaka eritreritra ratsy ao an-tsainao, handresy fotoan-tsarotra ary hino ny fahaizanao manatratra zavatra lehibe - na lehibe na lehibe.
Tsy misy afaka miverina ary manomboka fanombohana vaovao, fa afaka manomboka anio kosa izay rehetra afaka manao fiafarana vaovao. - Maria Robinson
Raha nanao hadisoana ianao dia misy fotoana hafa mety ho anao. Mety hanana fanombohana vaovao ianao isaky ny misafidy ianao, satria ity zavatra antsoinay hoe 'tsy fahombiazana' ity dia tsy ny fianjerana, fa ny mijanona. - Mary Pickford
Minoa ny tenanao sy izay rehetra misy anao. Fantaro fa misy zavatra ao anatinao izay lehibe noho ny vato misakana rehetra. - Christian D. Larson
Rehefa toa manohitra anao ny zava-drehetra dia tadidio fa miainga amin'ny rivotra ny fiaramanidina fa tsy miaraka aminy. - Henry Ford
Indraindray rehefa any amin'ny toerana maizimaizina ianao dia mieritreritra fa nalevina, saingy nambolena kosa ianao. - Christine Caine
Aza miandry zavatra lehibe hiseho. Atombohy ny misy anao, amin'izay anananao, ary izany dia hitarika anao hatrany amin'ny zavatra lehibe kokoa. - Mary Morrissey
Misy lalàna roa ny fiainana: # 1 Aza miala mihitsy. # 2 Tadidio foana ny fitsipika # 1. - Tsy fantatra
Ny maha-zava-kanto ny fiainana dia mandainga kely kokoa amin'ny famongorana ireo olantsika fa tsy amin'ny fitomboana miaraka amin'izy ireo. - Bernard Baruch
Handalo koa ity. - ohabolana persiana
famantarana fa tiako izy nefa matahotra
Ny fiondranana an-dalambe dia tsy faran'ny lalana… raha tsy tsy mahomby ianao. - Helen Keller
Misy fotoana miditra ny fiainantsika ireo olana ary tsy afaka manao na inona na inona isika hisorohana izany. Fa misy antony eo izy ireo. Rehefa mandresy azy ireo isika vao hahatakatra ny antony nahatongavan'izy ireo teo. - Paulo Coelho
Rehefa te hiala ianao dia tadidio ny antony nitazomanao fotoana elabe. - Tsy fantatra
Rehefa mamaky ny rano ianao, dia homba anao aho, ary rehefa mita ny ony ianao, dia tsy hanafotra anao izy. Rehefa mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may ianao, ary tsy handrehitra afo. - Isaia 43: 2
Aza kivy. Matetika io no lakilen'ny farany amin'ny fako izay manokatra ny hidiny. –Tsy fantatra
Ny fahombiazana dia ny fahaizana miala amin'ny tsy fahombiazana mankany amin'ny tsy fahombiazana nefa tsy very ny hafanam-ponao. –Winston Churchill
Ny zavatra lehibe eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy ny toerana misy anao loatra, fa ny làlan-kalehanao. - Oliver Wendell Holmes
Aleoko manandrana manao zavatra lehibe ary tsy mahomby toy izay manandrana tsy manao na inona na inona ary mahomby. - Robert Schuller
Mirehareha amin'ny halaviran'ny nahatongavanao ary minoa ny halavirana azonao atao. –Tsy fantatra
Vetivety, rehefa milamina ny zava-drehetra, dia hiverina hijery ity vanim-potoana iainanao ity ianao ary ho faly tokoa fa tsy nilavo lefona mihitsy. - Brittany Burgunder
Aza avela hanelingelina ny zavatra azonao atao ny zavatra tsy azonao atao. - John Wooden
Ataovy toy ny hoe misy fiovana ny zavatra ataonao. Marina izany. - William James
Raha tsy misy tolona dia tsy misy fandrosoana. - Frederick Douglass
Ny tsirairay dia manana vaovao tsara ao anatiny. Ny vaovao tsara dia tsy fantatrao izay mety ho vitanao! Tena afaka mitia ianao! Inona no azonao atao! Ary inona ny mety ho vitanao. - Anne Frank
Raha toa ka tokony hianjera ny nofy iray ka hamaky ampahany arivo, aza matahotra ny haka iray amin'ireo sombin-javatra ireo ary hanomboka indray. - Flavia Weedn
ny tokony ho marina amin'ny fotoana rehetra
Indraindray tsy tsapanao ny herinao manokana mandra-pahatonganao mifanatrika amin'ny fahalemenao lehibe indrindra. - Susan Gale
Ny voninahitsika lehibe indrindra dia tsy ny tsy fianjerantsika mihitsy, fa ny fiakarana isaky ny lavo isika. - Confucius
Ny dingana voalohany mankany amin'ny fahombiazana dia raisina rehefa mandà tsy ho babon'ny tontolo iainanao ianao. - Mark Caine
Mety tianao ihany koa (mitohy etsy ambany ny teny nalaina):
Fanononana 40 manentana ny fanahy momba ny fiainana azo antoka hanadiavana ny andronao
Fanononana 3 momba ny tanjaka sy herim-po ho anao rehefa mahatsapa ianao fa tsy afaka manohy
Teny 7 momba ny fandriam-pahalemana anaty mba hanampiana anao hahita ny anao
Teny 16 momba ny famelana ny lasa sy ny fiandrasana ny ho avy
Fanononana 20 momba ny manirery izay hahatonga anao hahatsapa ho kely kokoa
Tsy misy fetra ny fiainana, afa-tsy ireo izay vitanao. - Les Brown
Ny fidinana any amin'ny lavaka tsy hita noanoa no ahazoantsika ireo harena sarobidy eo amin'ny fiainana. Izay mahatafintohina anao dia eo no mipetraka ny harenao. - Joseph Campbell
Lazao foana hoe ‘eny’ mandraka ankehitriny. Inona no mety ho zava-poana sy very saina kokoa noho ny mamorona fanoherana anaty izay efa misy? Inona no mety ho very saina kokoa noho ny manohitra ny fiainana mihitsy, izay ankehitriny sy ankehitriny foana? Mitolo-batana amin'izay misy. Lazao amin'ny fiainana ny 'eny' - ary jereo ny fomba manomboka miasa tampoka aminao ny fiainana fa tsy manohitra anao. - Eckhart Tolle
Mianjera im-pito mitsangana im-balo. - ohabolana japoney
Tsy afaka mandresy ilay olona tsy milavo lefona fotsiny ianao. - Babe Ruta
Roapolo taona izao dia ho diso fanantenana kokoa ianao amin'ireo zavatra tsy nataonao noho ireo nataonao. Ario àry ny tsipika fitifiana, miondrana an-tsambo hiala amin'ny seranana azo antoka, araraoty ny rivotra mifehy ny varotrao. Mikaroha. Nofy. Discover. - Matetika omena an'i Mark Twain, na dia tsy misy porofo mazava aza na nilaza na nanoratra azy izy
Avelao hampifaly anao ny fanantenanao. Mahareta amin'ny fotoan-tsarotra ary aza mitsahatra mivavaka. - Romana 12:12
Raha tokony omeko ny tenako ny antony tsy vitako, omeko ny tenako ny antony ahafahako manao. –Tsy fantatra
Tokony hanaiky ny fanaintainana isika ary handoro azy ho solika amin'ny diantsika. - Kenji Miyazawa
Amin'ny fotoana rehetra, azonao atao ny milaza hoe: Tsy izany no hiafaran'ilay tantara. - Christine Mason Miller
Ny fiainana dia fampianarana mifandimby izay tsy maintsy iainana mba ho azo. - Helen Keller
Mety hahita faharesena maro ianao, fa tsy tokony ho resy. Raha ny marina dia mety ilaina ny miatrika ny faharesena, mba hahafantaranao hoe iza ianao, inona no azonao hatsangana, ary ahoana no ahafahanao mivoaka avy ao. - Maya Angelou
Boribory izao tontolo izao ary ny toerana izay mety toa ny farany dia mety ho fanombohana ihany koa. - Ivy Baker Priest
Andramo indray mandeha. Tsy mahomby indray. Tsy hahomby kokoa. - Samuel Beckett
Ny fomba tokana hahitana ny fetran'ny azo atao dia amin'ny alàlan'ny alàlan'izy ireo mihoatra ny zavatra tsy vita. - Arthur C. Clarke
Eo afovoan'ny zava-tsarotra rehetra dia misy ny fahafaha-manao. - Albert Einstein
Ny tolona rehetra amin'ny fiainanao dia namolavola anao ho tonga olona ankehitriny. Misaotra noho ny fotoan-tsarotra izay vao afaka mampatanjaka anao. - Tsy fantatra
ohatra ny fetra amin'ny fifandraisana
Ataovy foana izay vitanao. Izay ambolenao izao dia hijinja aty aoriana. - Og Mandino
Ny fomba azo antoka indrindra hahombiazana dia ny manandrana indray mandeha monja. - Thomas Edison
Ny hery sy ny fitomboana dia tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny ezaka sy tolona mitohy. - Napoleon Hill
Tsy fantatrao mihitsy hoe matanjaka ianao mandra-pahatonga anao ho matanjaka irery no safidy anananao. - Bob Marley
Toa tsy ho vita foana izany mandra-pahavitany. - Nelson Mandela
Loza no mitranga. Azontsika atao ny mamantatra ny antony, manome tsiny ny hafa, maka sary an-tsaina ny fahasamihafan'ny fiainantsika raha tsy nisy izany. Saingy tsy misy zava-dehibe izany: nitranga izy ireo, ary dia izany no izy. Manomboka eo dia tsy maintsy esorintsika ny tahotra izay nifoha tao amintsika ary nanomboka nanangana indray. - Paulo Coelho
Tsy ilay tendrombohitra resintsika no resahina fa isika. - Edmund Hillary
Nomena anao ity fiainana ity, satria matanjaka ianao miaina izany. - Tsy fantatra
Ny fandrosoana rehetra dia atao ivelan'ny faritra misy ny fampiononana. - Michael John Bobak
Raha nianjera ianao omaly dia mitsangàna anio. - H. G. Wells
Izay sahy tsy hahomby be ihany no hahavita be. - Robert F. Kennedy
Iza amin'ireo teny fampaherezana ireo no tianao? Nisy tamin'izy ireo ve nitsambikina sy niresaka taminao tao am-poko tamin'ny fomba azony? Mametraha hevitra etsy ambany.
maninona no sarotra be ny fiainana?
ahoana no atao hoe olona manana fanahy malalaka
zavatra tokony hatao rehefa tsy manana namana ianao
rehefa manomboka misintona izy
misaotra atao rehefa mankaleo
toetran'ny namana tsara